Ukungcungcuthekiswa ngokweemvakalelo kwesi sibini | IBezzia
Ukungcungcuthekiswa ngokweemvakalelo kwesi sibini
UMaria Jose Roldan | 21/07/2021 22:02 | Psicología
Ukungcungcuthekiswa ngokweemvakalelo kwesi sibini kuyinto eqhelekileyo kwaye ixhaphakile kunokuba abantu becinga. Imalunga nokusetyenziswa kweqabane ngokwengqondo ukuze isebenze njengoko umnyama efuna ngokwakhe.
Emva kweso senzo sobugqwetha okanye ubuqhetseba kuhlala kukho umntu osweleyo ngokucacileyo kwezokhuseleko nokuzithemba. Ukungcungcuthekiswa ngokweemvakalelo phakathi kwesi sibini akunakuvunyelwa naphantsi kwazo naziphi na iimeko kwaye kubalulekile ukuyiphelisa.
1 Ukungcungcuthekiswa ngokweemvakalelo kwesi sibini
2 Uyazi njani ukuba ubumenemene bemvakalelo buvela kwesi sibini
3 Ungajongana njani nokungcungcutheka ngokweemvakalelo kwiqabane lakho
Njengoko sele sichazile ngasentla, uhlaselo ngokweemvakalelo luhlobo lokukhohlisa komntu komnye umntu. Ngobuqhetseba obunjalo, umntu omnyama unokukwazi ukumrhoxisa omnye umntu kwaye amenze ukuba enze ngendlela afuna ngayo. Oku kubangela ukuba ubudlelwane besibini bube yityhefu kunye nomonakalo ngokweemvakalelo onalo kwelinye lamaqela.
Ubudlelwane obuphilileyo kufuneka busekwe kwiimpawu ezibalulekileyo njengothando, imbeko kunye nonxibelelwano. Alunakubakho uhlobo lwe-blackmail okanye isoyikiso kwinqanaba leemvakalelo. Kwimeko apho uhlaselo ngokweemvakalelo lwenzeka rhoqo, isifundo kufuneka sibuphelise ubudlelwane kwaye sikhawuleze sinciphise ilahleko.
Uyazi njani ukuba ubumenemene bemvakalelo buvela kwesi sibini
Ngamanye amaxesha akukho lula ukubona ubuqhophololo ngokweemvakalelo phakathi kwesi sibini, kuba umntu onobuqhetseba akayazi ngokupheleleyo ukuba uhlasela umntu omthandayo ngokweemvakalelo. Nazi ezinye zeempawu ezicacileyo zokungcungcuthekiswa ngokweemvakalelo:
Umlawuli wenza iqabane lakhe linetyala ngezenzo zalo ngoko uziva unetyala kwaye unexesha elibi ngokwenene.
Udlala ixhoba kuyo yonke into ngakumbi ukunqanda umxholo ukuba ungawushiyi.
Uhlala esenza zonke iintlobo zezithembiso angazigcini kamva. Ezi zithembiso ziyinjongo okanye injongo yokugcina umntu omthandayo ecaleni kwakho.
Ukusetyenziswa kwezisongelo kuyaqhubeka kubudlelwane ukuvelisa uloyiko oluthile kulowo umthandayo, ukongeza ekubeni nakho ukunciphisa umda kwinkululeko yomntu othethiweyo.
Olunye uphawu olucacileyo lokungcungcuthekisa ngokweemvakalelo kukuthula. Umntu omnyama uthatha isigqibo sokuvala umlomo ukubonisa umsindo wakhe kwaye uyala ukuthetha neqabane lakhe. Luhlobo lokuxhatshazwa ngokwengqondo olujongela phantsi ngokuthe ngcembe umntu ophantsi kwakhe.
Ungajongana njani nokungcungcutheka ngokweemvakalelo kwiqabane lakho
Okokuqala, qaphela ukuba imeko yokugcungcutheka ngokweemvakalelo iyenzeka kulwalamano. Ukusuka apha, kuya kubaluleka ukuya kwingcali eyaziyo indlela yokunceda umntu onetyhefu.
Ayinakuvunyelwa naphantsi kwazo naziphi na iimeko ukuba ulawulo lusekiwe kwisibini njengesiqhelo. Ngamnye kufuneka akhululeke kwaye abe nendawo yakhe kubudlelwane.
Izisongelo kufuneka ziyeke ukubakho ngaphakathi kwesi sibini. Kukho uthotho lwamaxabiso ekufuneka abekhona ngalo lonke ixesha, afana nentlonipho okanye unxibelelwano.
Umntu onobuqhetseba kufuneka afune ukutshintsha kwaye aqonde ukuba abanakho ukusebenzisa ubumenemene bemvakalelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Psychology kunye nesibini » Psicología » Ukungcungcuthekiswa ngokweemvakalelo kwesi sibini
Izindululo ezintsha zolwandle lweWomen'Secret